तपाईंले यो कमाउन स्थानीय बारमा शुल्क घटाउने समयभरी तन्तनी पिएकै हुनुपर्छ l तपाईंले थुप्रै गिलास बियर कमाएको भएपनि, एउटा बियर भुँडीको गर्व भने गर्न सकिदैन किनकि त्यो तपाईंको स्वास्थ्यको लागि एकदमै खतरनाक हुन्छ l कसैको लागि यो अवस्था एउटा साधारण यातना हुनसक्छ, महिलामा भन्दा पुरुषमा अझ बढी l सुस्त गतिरहित जीवनशैली र क्यालोरीहरु थप्न घन्टौ बिताएको समयको लागि सेवा गरेको टोकन सरह एउटा बियर भुँडी साधारणतया मध्यम वयस्क पुरुषमा भेटिन्छ l एउटा बियर भुँडी कसरी बन्छ ? पुरुषमा एउटा बाहिर निस्किने मिड-सेक्सन जब उनीहरुले बर्न गर्न सक्ने भन्दा बढी सेवन गर्छन् त्यतिबेला बन्छ l त्यसैले व्यस्त जीवनशैली र थोरै कसरत र स्वतन्त्रताले कोही आफुले पचाउन सक्नेभन्दा धेरै क्यालोरीहरु सेवन गर्न सक्छन् l डा. माइकल जेन्सन एम.डी, मायो क्लिनिकमा इन्डोक्राइन र मोटोपन विशेषज्ञको अनुसार रहिरहेको बोसोको सट्टा अल्कोहलबाट लिइएको क्यालोरीहरु लिभरले बर्न गर्छ l त्यसैले भनौ, यदि एउटा औशत बियर १५० क्यालोरी हाराहारी छ र त्यससँग सबै साना खाजाहरु (पिज्जा, चिप्स आदि) गरेर कसैले सजिलै बुझ्छ कसरी यी कुराहरु पेटको क्षेत्रमा थुप्रिएर बस्छन् र फुलेको पेट हुन्छ l र किनकि लिभर बियरबाट पाएको क्यालोरीहरु बर्न गर्न निकै व्यस्त हुन्छ बाँकीको कुराहरु पेटभरि बस्न पाउने ठाउँ पाउँछन् l यसैले प्राय पुरुष र केही महिलाहरुलाई फुलेको पेट वा बियर भुँडी दिन्छ! तपाईंको फुलेको भुँडीलाई एक पन्च दिनुहोस् सुरुवाती अवस्थामा हुनेहरुको लागि एउटा दिने हुनुहोस् र लिने नहुनुहोस् l जसको अर्थ कसरतहरु जस्तै दौडिने, साइकल चलाउने, पौडी खेल्ने, नाँच्ने वा एरोबिक्समा बढी समय दिनुहोस् जसले आन्द्रा र पेटको बोसोहरुको ख्याल गर्छन् l जब कसैको उमेर बढ्दै जान्छ उनीहरुको क्यालोरी कम हुँदै जानुपर्छ तर उनीहरुको शारीरिक क्रियाकलाप पनि त्यस्तै घट्नुपर्छ र यही बेला बोसो थुप्रिन्छ l यदि तपाईंले पिउनैपर्छ भने हल्का बियर रोज्नुहोस् तर जस्तो सुकै अवस्थामा कसरत गर्न नछोड्नुहोस् l
जब एक स्किनकेयरको बारे सोच्दा, मनमा के आउँछ ? डण्डीफोर, चिल्लो छाला, खटिराको निशान, फेस वास्, फेस प्याक्स । महिलाहरुले यो बुझ्न जरुरी छ कि स्किनकेयर अनुहारमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन !छालाको समस्याहरु अनुहारमा मात्रै सीमित छैन । थुप्रै ठाउँहरू छन् जहाँ समस्या हुन सक्छ । यसलाई सधैं घृणा गरी सहनु पर्दैन ! मोलहरु: जब छाला गुच्छा परेर बढ्छ मोल बन्न थाल्छ । मोलहरु निकै नोक्सान विहिन हुन्छन । कहिलेकाहीँ, मोलहरू गंभीर मेलानोमस अग्रगामी पनि हुन्छन् । यदि तपाईंको मोल अचानक ठूलो हुन्छ वा रङ परिवर्तन गर्छ वा रक्तचाप सुरु हुन्छ भने, तपाईंको डर्मटोलोजिस्ट्लाई तुरुन्तै भेट्नुहोस् । उहाँले गम्भीर कुरालाई जाँच गर्न एक बायोप्सी गर्ने सल्लाह दिनुहुनेछ । स्पष्ट हुनु सँधै सुरक्षित हुन्छ ! रोजासिया: यो एक चिन्ताजनक छाला अवस्था हो जुन निश्चित सुरुवात द्वारा आउँदछ । यो सामान्यतया अनुहारमा रातो धब्बा, अनुहारमा सानो रातो फराकिलो रूपमा प्रकट हुन्छ । यसलाई सुरु गर्ने धेरै कुराहरु छन्, सबै भन्दा साधारण कुरा सुर्य पर्न आउँदछ । रोजासियाको लागि कुनै उपचार उपलब्ध छैन त्यसकारण सूर्य, रक्सी र अत्यधिक तापमानहरु देखि बचनु एकमात्र समाधान हो । मध्यम देखी गम्भीर अवस्थाका लागि, खाध्य एंटीबायोटिक्स निर्धारित गरिन्छ । गम्भीरता अनुसार लेजर उपचारको पनि विकल्प हुन्छ जसले घाउको नशाको जरालाई खान्छ । भित्र उम्रने कपाल: धेरै व्याक्स र सेविङ गर्नुको परिणाम कपाल छर्पस्ट उम्रने गर्दछ । यसको परिणाम कपाल घुङ्ररिनु र पिछाडी फर्केर उम्रने हुन्छ । विशेष गरी यदि यो संक्रमित भयो भने यो एक दर्दनायक स्थिति हुनसक्छ । छालालाई स्वतन्त्र रूपमा बढ्न र सफा गर्न मन तातो पानीमा कपडा भिझाएर छाला पुछ्नुहोस् । यदि पिपले पहिले नै यसमा स्थान पाएको छ भने, यसमा थोरै बिनजेल पेरोक्साइड लगाउनुहोस् । छाला फाट्नु: जब छिटो वजन बढ्नुका कारण तपाईंको छाला तन्किन्छ, जस्तै गर्भावस्थामा, यसको परिणाम अनुसार नराम्ररी छाला फाट्छ । छाला फाट्नु गर्व र आनन्दित उपलब्धि भए तापनि यो अफ्ट्यारो यथार्थ पनि हुन सक्छ ! जब तिनीहरू अझै निर्मल र गुलाबी छन् तिनीहरूका लागि उपचार सम्भव छ । भिटामिन ए अथवा रेटिनोइड आधारित क्रीम नियमित रूपमा लगाउँदा छाला अधिक रुपमा पातलो बनाएर छाला फाटिएको दृश्यतालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ । सेतो धब्बा: सेतो धब्बाहरु पिएमपिएल्इ देखि भिटिलिगो सम्म जे पनि हुन सक्छन् ।पोलिमोर्फ्स लाइट ईरप्सन सामान्य सेतो धब्बाहरू हुन जुन तपाइँको सूर्यमा धेरै समय अवशेष भएका भागहरूमा आउँदछ । सूर्यको कठोर किरणहरू द्वारा मेलानोसाइट्सको क्षतिको कारणले गर्दा हुन्छ । केहि अवस्थाहरुमा, यसता एन्टिबडिहरु हुन्छन् जुन शरीरले मेलानोसाइट्सको विरुद्ध उत्पन्न गर्छ र यसले अनियमित स्थानहरूमा मेलानोसाइट्स हरुलाई मार्दै जान्छ । यसले शरीरका अनियमित स्थानहरूमा ठूलो सेतो धब्बा बनाँउछ जुन सामान्य रूपमा फैलिन्छ । त्यसैले घाममा निस्किदा जहिल्यै सन ब्ल्क लगाउनुहोस् । यदि तपाईंले आफ्नो धब्बा बढ्दै गरेको पाउनु भयो भने, तपाईंको डर्मोटोलोजिस्ट्सँग सल्लाह गर्नुहोस् । वाँहाले यो भिटिलिगो हो कि हैन भनेर निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ । भिटिलिगोको कुनै उपचार छैन, खाध्य औषधीहरु उपलब्ध छन्, जसले सुर्यको किरणको साथ छालाको रङ पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ । जन्मचिन्हहरूः यो बडी बढेका पिग्मेन्ट सेलहरु हुन । अधिकांश जन्मचिन्हहरू समय सँग हराउँदै जान्छ । यद्यपि, यदि तपाईंको बढ्दै जान्छ र गाडा कलेजी रंगमा परिवर्तन हुन्छ भने, छाला विशेषज्ञ द्वारा आफ्नो जाँच गराउनुहोस् । यो मेलानोमा हुने सम्भावना हुन सक्छ । जन्म चिन्हहरू सामान्यतया हानिकारक हुँदैनन र कस्मेटिक कारणहरूका लागी बाहेक हटाउन आवश्यकता पर्दैन । तथापी केहि चिकित्सा अवस्थाहरु जस्तै मेलानोमा यसलाई हटाउन समर्थ हुन्छ । भेरीकोज नसाहरु: जब खुट्टामा रगत गुरुत्वाकर्षणको विरुद्ध बग्न सकिँदैन वा यदि खुट्टाका नसाहरु खराब छन भने रगत खुट्टामा स्तगित हुन थाल्छ । यसले खुट्टा सुनिन थाल्छ र नसाहरु फुलेको देखिन थाल्छ । यो दर्दनायक अवस्था मोटो मान्छेमा हुन्छ, कहिलेकाहीं गर्भावस्थामा र दिनभरी खडा हुन आवश्यक जगारी भएका मानिसहरूमा हुन्छ । छातीको स्तर माथि खुट्टा राख्नु सामन्य देखी मध्यम अवस्थाहरूको समाधान हो । गम्भीर अवस्थामा, लेजर उपचार समाधान हो । खतहरु: बच्चा हुँदा, तपाईंले झुकिएर आफ्नो वुवाको बाइकको तातो साइलेन्सरमा खुट्टा जलाउनु भएको छ ? त्यस घटनाको याद दिलाउन तपाईंसँग अझै खत छ होला ! खतहरु छालाको कोलाजेन र इलास्टेनमा चोट लागेपछी हुन्छ । यदी खत छ भने तपाईं त्यसका साथ बाँच्नु पर्ने हुन सक्छ । तथापि, नयाँ चोटले जिवनभरी समझना दिलाउनुपर्छ भन्ने कुनै कारण छैन । छालाको रङ उड्नु, डन्डीफोरबाट हुने केलोइड्स वा पकमार्क्स्, जे खत होस्, तीनलाई उपचार गर्न धेरै क्रीम र लेजरहरुका विकल्पहरू उपलब्ध छन् । उमेरका दागहरु: लिभर स्पट्स पनि भनिने, यिनिहरुको लिभर वा उमेरसँग केहि सरोकार हुँदैन । तपाईंको छालाले सुर्य प्रदर्शनको सामना गर्न अतिरिक्त मेलानिन उत्पादन गर्नुका कारण यो बन्छ । वैकल्पिक ब्लिचिङ क्रीम जस्तै हाइड्रोकुइनोन र एक्स्फोलिएटिङ क्रीम जस्तै रेटिनोइड आधारित क्रीमले दागहरु कम गर्न मद्दत गर्छ । यो तपाईंको डर्मटोलोजिस्ट्को निर्देशनमा मात्र गर्नुहोस् । अन्य विकल्पमा रासायनिक पिल र माइक्रोडरमोब्लेसिन समावेश छ । पुरानो जिद्दी दागहरुको लागि लेजरहरू अन्तिम उपचार विकल्प हो । एक्जिमा: यो एक दीर्घकालिक छाला रोग हो, जसलाई एटोपिक डेर्मेटाइटिस पनि भनिन्छ । प्राय: यसका सामान्य लक्षणहरू सुख्खा र चिलाउने छाला, मुखमा घाउ, कुइनो भित्र, घुँडा पिछाडि, र हात र खुट्टामा घाउ हुन्छ । हाल, एक्जिमाको निको पार्न कुनै पनि परीक्षण छैन, त्यसैले चिकित्सकहरू तपाईंको र तपाईंको परिवारको बारे जानकारीमा निर्भर पर्दछन । उपचार विकल्पहरूमा निको हुने औषधी समावेश हुँदैन्, केवल चिलाएको र पोलेकोबाट तुरुन्त राहत प्राप्त गर्न सकिन्छ । हाइभ्स्: हाइभ्स् तपाईंको छालामा रातो र कहिलेकाँही खुट्टामा हुने गाँठो हो । तिनीहरू सामान्यतया केहि खानेकुरा वा ड्रगको एलर्जी प्रतिक्रियाको रूपमा देखा पर्छन् । अन्य एलर्जी को केहि रूप भएको मान्छेहरुलाई, एलर्जी नभएको मान्छेहरु भन्दा बडी हाइभ्स लाग्ने अधिक संभावना छ । अन्य कारणहरूमा संक्रमण र तनाव समावेश गर्नसकिन्छ । प्रायजसो हाइभ्स आफै जान्छ, तर यदी तपाईंको गम्भीर समस्या छ भने, तपाईंलाई चिकित्सा सहायताको आवश्यक पर्न सक्छ । छाला हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठूलो अंग हो । यो हाम्रो शरीर र बाहिरी, ब्याक्टीरिया, भाइरस र अन्य खतरनाक माइक्रोबक्स हरूले भरिएको हानिकारक संसारको बीच सुरक्षात्मक अवरोध हो । त्यसैले, हाम्रो छालाको हेरचाहलाई हाम्रो स्वास्थ्य हेरविचार सूचीमा शीर्ष स्थान दिना अत्यन्तै आवश्यक छ ।
प्रत्येक उमेर समुहसँग आफ्नै तनावको कारणहरु छन् l आफ्नो बच्चाहरुलाई उनीहरुको सम्हाल्न दिनुहोस् lप्राय जब हामी तनावले भरिपूर्ण हुन्छौ, हामी बिगतमा जान्छौ र प्रतिबिम्बित गर्छौ l हामी बाल्यकालको सुनौलो दिनहरु सम्झिन्छौ l हामी ति दिनहरु उत्सुकताको साथ सोच्छौ, खुला र स्वतन्त्र समय सम्झन्छौ l हामी फेरी केटाकेटी बनौ भन्ने महसुस गर्छौ l तर सत्य के हो भने कुनै उमेरमा पनि हामी तनाव र चिन्ताबाट स्वतन्त्र छैनौ l त्यो केवल समयसँग हो, हामी नयाँ अवस्थाहरुमा सर्छौ र प्रत्येक नयाँ तनाव दिने कारक पहिलेको भन्दा खराब लाग्छ l केटाकेटीहरु पनि तनाव लिन्छन्, कोही अरु भन्दा बढी l तनाव दिने कारणहरु स्कुलमा हुने साधारण कुरा जस्तै एउटा परिक्षण, एउटा शारीरिक सिप कक्षा वा कविता वचन साना केटाकेटीहरुको लागि ठुलो तनाव हुनसक्छ l बच्चाहरुमा आमाबाबु र शिक्षकहरुको आशा पुरा गर्ने इच्छाले पनि ठुलो दबाब निर्माण गर्नसक्छ l उनीहरु कहिलेकाँही राम्रो गर्ने इच्छा राख्छन् र सानो गल्तीहरुले ति बच्चाहरुलाई अत्यन्तै निरास बनाउँन सक्छ l साथीको समुहहरु व्यवस्था गर्न कठिन हुन्छ l बाल्यकालमा, सामाजिक परिपक्कता दैनिक द्वन्द्वहरुको सम्हाल्नको लागि पर्याप्त विकसित हुदैन l कक्षाका साथी वा छिमेकका साथीहरुको टिप्पणीहरु र सानातिना झगडाहरुले कलिलो मस्तिष्कमा दिर्घकालिन प्रभाव प्रभाव पुर्याउन सक्छ l उनीहरु आफ्नो साथीहरुद्वारा सजिलै प्रभावित हुन्छन् l ठुला दाजु दिदीहरुले प्रमुख भूमिका खेल्छन् l केही सुझाव दिन्छन् भने कसैले दुर्व्यवहार गर्छन् l केहीले थाहा नदिइ हानी पुराउँछन्, कोही मतलव नगर्ने हुन्छन् l जीवन नयाँ कुराहरुले पूर्ण छ र बाल्यकाल फास्ट-ट्रयाक सिकाइ पाठ हो l प्रत्येक दिन, एउटा बच्चाले गर्नको लागि केही नयाँ छ l एउटा नयाँ बच्चा भेट्नु, एउटा नयाँ विषय सिक्नु, फरक तरिकाले भकुण्डो हिर्काउनु, वा एउटा साइकल चलाउनु; सिक्नको लागि धेरै छ l यिनीहरुले निरासापन गराउन सक्छ र बच्चालाई बेचैन बनाउँन सक्छ l प्रदर्शनको दबाबहरु, प्रविधि, स्मार्टनेस, मिडिया प्रभावहरु आदि केही अरु कारकहरु हुन् जसले बाल्यकालमा तनाव थप्छन् l चिन्हहरु भाव र व्यवहारमा सुक्ष्म परिवर्तनहरु हेर्नुहोस् l वयस्कहरुसँग, तनाव पहिचान गर्न सहज हुन्छ र त्यो सच्याउन पनि l तर केटाकेटीसँग यो एउटा चुनौती हो l प्राय केटाकेटी आफैलाई उनीहरु कस्तो तनाव अनुभव गरिरहेका छन् भन्ने थाहा हुदैन, उनीहरु किन निरास, रिसाएको वा डराएको छन् भन्ने बुझ्दैनन् l उनीहरु सहज हुदैनन् l असामान्य रुने र चिच्याउने एउटा साधारण चिन्ह हो l एक्लो हुने, शान्त हुने पनि एउटा तरिका हो जुन केटाकेटीहरु आफ्नो तनाव अभिव्यक्त गर्छन् l शारीरिक चिन्हहरु साधारण शरीर क्रियात्मक परिवर्तनहरुमा देख्न सकिन्छ (धेरै सुत्ने वा सुत्न नसक्ने), खाने बानीहरु (नखाने वा धेरै खाने) बारम्बार दुख्ने, विशेषगरी पाचनमा गडबडी र टाउको दुख्ने आदि l बाल्यकाल तनाव व्यवस्थापन तपाईको बच्चालाई ध्यान दिनुहोस् l उसले के भनिरहेको छ सुन्नुहोस् तर उसले शब्दमा के भनिरहेको छैन. कार्यमा मात्रै भएपनि त्यसलाई सुन्ने कोशिश गर्नुहोस् l बच्चालाई तपाईंसँग खुलिने गर्न मद्दत गर्नुहोस्, उनीहरुसंग गुणस्तर समय बिताउनुहोस् र जेको बारेमा पनि कुरा गर्नुहोस् l उनीहरुको स्कुल शिक्षक र उनीहरुको मिल्ने साथीहरुको आमाबाबुहरुसँग राम्रो सम्पर्कमा रहनुहोस् l आवश्यक छ भने, मनोवैज्ञानिकहौर र बच्चा परामर्शदाताहरुसँग व्यावसायिक सहयोग माग्न नहिचकिचाउनुहोस् l “तपाईंलाई जीवनमा हुनसक्ने एउटा सबभन्दा भाग्यमानी कुरा भनेको मेरो विचारमा, एउटा खुशी बाल्यकाल पाउनु हो l”- अगाथा क्रिस्टी
जस्तै दिमागले चाल-ढाललाई असर गर्छ त्यस्तै गरि चाल-ढालले दिमागमा असर गर्छ ।अनि उहाँहरुले तपाईलाई के भनेका छन् ? केवल शाररिक रुपमा आकर्षक मान्छेलाई आत्मविश्वासी हुन अधिकार छ ? त्यो कि तपाईमा छ या छैन ? यो बुझौं, सबै कुरा र हरेक कुरालाई आत्मविश्वास चाहिन्छ । गाडी चलाउने देखि काम गर्ने देखि होस् या डेटमा जानु होस्, आत्मविश्वासले परालबाट गहुँ छुट्टाउँछ । तपाइले के सम्झनु पर्छ भने दिमागले चाल-ढाल बदल्छ । विपरीतमा यदि तपाइले चाल-ढाल बदल्नु हुन्छ भने त्यसले दिमागमा पनि असर गर्छ । मि. हंच्डड ओभर आफुलाई मन नपराउने यो मान्छे त्यसको उदाहरण हो । यो संसार उहाँको लागि सबै भन्दा खतरनाक हो । उहाँले हिंडेको तरिका हेर्नु । कुम्भ र टाउको तल राखेर, खुट्टा घिसारेर हिड्दै हुनुहुन्छ । श्री हंच्ड ओभर बोल्ने बेला मान्छेहरुको आँखामा हेर्न सक्दैन अनि उहाँको दिमाग जस्तै उहाँको हात मिलाउने तरिका पनि अल्छि लाग्दो छ । उहाँले हात बाँधेर बस्छ अनि हरेक समय झुटो बोल्ने बेला नांक बढेको छ कि छैन भनेर नांक छुनु हुन्छ । मिस्टर वाक द वाक एण्ड टक द टक यो मान्छे पहिलोको भन्दा धेरै नै फरक छ । उहाँको हिडाई, व्यवहार र बोलिमा आत्मविश्वास देखिन्छ । उहाँ माथि हेरेर, चिउँडो भित्र हालेर र कुभ माथि राखेर हिड्नु हुन्छ जसमा आत्मविश्वास देखिन्छ । यसले उहाँलाई आत्मविश्वास दिन्छ किनकी उहाँको मुद्र दक्षताको लागि बनेको छ । तपाईलाई भन्छु उहाँ रड जस्तो सिधा छैन, यति सिधा हुनुहुन्छ कि उहाँको कान, उहाँको कुभ र कम्मरको बराबर छ । छाति पनि बाहिर निस्केको छ किनकी कुम्भ पछाडी कम्मर तिर छ । यसले गर्दा गहिरो र सजिलोसँग साँस लिन मिल्छ जसले चिन्ता रोक्छ । उहाँको हात मिलाउने तरिका कढा छ । बलियो पकड संकेत गर्नको लागि उहाँले हात मिलाउने बेला अर्को मान्छेको हातमा सहि दबाव दिन्छ । यो कुस्ती खेल्ने ठाउँ होइन, आत्मविश्वास भएको मान्छेले हात मिलाउने बेला सहि बल लगाउँछ । कुरा गर्ने बेला उहाँले अर्को मान्छेको आँखामा हेर्नु हुन्छ, आँखा तरेर होइन तर सामान्य तरिकाले हेर्नु हुन्छ जसले गर्दा आरुलाई टरेको महसुस हुदैन । आफ्नो आँखालाई आराम दिनको लागि उहाँले यता उता हेर्नु हुन्छ । त्यसैले उहाँ साँचो देखिनु हुन्छ, अस्थिर देखिनु हुदैन । हुन लागेको मिस्टर या मिस वाक द वाक हिड्ने बेला संधै आफ्नो कुम्भ पछाडि अनि टाउको माथि राख्नु । तिमी घमण्डी देखिन सक्नु हुन्छ तर यसले तपाइको आत्माबलमा राम्रो हुन्छ अनि तपाईलाई आफ्नो बारेमा राम्रो महसुस हुन्छ । बबाल र आत्मविश्वासी हुन अग्लो मान्छे हुनु पर्दैन तपाई आफ्नो उचाईमा उब्बिनु अनि चमत्कार हेर्नु । बिस्तारै अनि गहिरो साँस लिनु । साँस भित्र लिनको लागि पेटको मांशपेसी प्रयोग गर्नु पर्छ किनकी घाँटीको मांशपेसीले तपाईलाई सानो साँस लिने बनाउँछ अनि साँस फेर्दा तपाईले आफ्नो पेट र करंग बढेको महसुस गर्नु भएन भने तपाईलाई कुप्रो बनाउँछ । ऐनाको अगाडि उब्बेर बोल्ने अभ्यास गर्नु । त्यसले तपाई अरुको अगाडि कस्तो देखिनु हुन्छ त्यो देखाउँछ । भिडियो क्यामेराको अगाडि हिडाईको अभ्यास गर्नु अनि आफ्नो मेटामोर्फसिसको रेकोर्ड राख्नु ।
बिग्रिएको सम्बन्ध पछि आफैलाई ठिक पार्नएउटा प्रेम सम्बन्ध सुधार पार्न कुनै एउटा फर्मुला छैन l साथै तपाईं एउटा सम्बन्ध सुधार गर्न सक्नुहुदैन जस्तै तपाईंले एउटा भाचिएको फोन जोड्न सक्नुहुन्छ l प्रत्येक सम्बन्ध एउटा हुर्किएको रुख जस्तै हो l जब त्यो भाँचिन्छ, तपाईंले त्यो जमिनमा कुहिन दिनुपर्छ- सम्बन्ध बिग्रिएको समयअवधी र तपाईंको पुनरागमन बीचको समय रुपान्तरणको समय हो, यो समय आफैलाई बुझ्ने, अरुसँग तपाईंको सम्बन्ध बुझ्ने र संसार समक्ष पुग्ने समय हो lके तपाईंलाई थाहा थियो ब्रेकअपमा गैरहेका ५०% भन्दा बढी मान्छेहरु निरासापनबाट आफैलाई उद्दार गर्नको लागि खाएर सन्तुष्टि पाउँछन् ? तपाईंले लुकाईरहनुभएको भावनात्मक चिन्हहरु पत्ता लगाउन आफु जे खानुहुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुहोस् l तपाईंको खानकीमा ध्यान दिनुहोस् र शरीर हेरचाह गर्नुहोस् lयहाँ सात चरणहरु छन् जसबाट तपाईं सचेत भएर आफ्नो बिग्रिएको सम्बन्धबाट निको पाउन सक्नुहुन्छ l त्यस्तो प्रक्रिया सिधा हुँदैन र त्यहि समयमा थुप्रै चरणहरु पार भैरहेको हुनसक्छ वा फरक क्रममा हुनसक्छ l यद्दपी
बाथ एक दुखद स्थिति हो जुन सामान्यतया ५० वर्ष भन्दा बढी उमेरका वयस्कहरूमा हुन्छ । यस मस्कुलोस्केलेटन प्रणालीमा, विशेषगरि जोर्मी प्रभावित हुन्छ जसले शारिरको गतिशीलता कम गर्छ, शरीर अरर्रो हुन्छ र पिडा दिन्छ l हुन त बाथ भन्ने जोर्नीको कडापनलाई बुझाउने सामन्य शब्द हो तर १०० भन्दा बढी बाथ जस्तै रुमेटोइड बाथ, ओस्टियोआर्थराइटिस, बच्चालाई लाग्ने बाथ, र संक्रामक बाथ हुन्छन् ।रुमेटोइड बाथ एक भ्रामक प्रकारको बाथ हो जहाँ साइनोभियल फ्लुडको कार्य अवरुद्ध हुन्छ । यो सामान्यतया ६० बर्ष माथीका महिलामा देख्ने गरिन्छ । साइनोभियल फ्लुडले जोर्नी, हड्डी र कार्टिलेज सम्बन्धि स्वस्थ्यलाई कायम गर्छ ।ओस्टियोआरथ्राईटिस दुवै महिला र पुरुषमा देखापर्छ । यस प्रकारमा कार्टिलेज नामक हड्डी क्रमस खिया पर्दै जान्छ जसले गर्दा हड्डीका कार्टीलेजहरु खिइदै जाने हुन्छ र मांशपेशी, जोर्नी र टेण्डनमा दुखाई पिडा हुन्छ र अरर्रोपन गराउँछ l बाथको बिरामीमा क्याच २२ अर्थात् समाधाननैं नहुने अवस्था आउँछ जसमा उनीहरुले अभियास गर्दा चरम ध्यान दिनु भनिन्छ । शारीरिक कसरत गर्दा धेरै पिडा हुने भएकोले कसरतनैं पुरै रोक्नु भनिन्छ । अब कसरतको कमिले गर्दा शरीरको अवस्था झन् बिर्ग्रंदै जानुका साथै सुन्निने गर्छ जसले गर्दा अंगको आकारनैं बिग्रन्छ । बाथ भएका बिरामीलाई यस्तै कुराको चुनौती हुन्छ । के बाथका बिरामीलाई कसरत गर्न दिनुपर्छ ? यदि पर्छ भने कस्ता प्रकारका दिनु उचित हुन्छ ? प्रमुख प्रश्न : बाथ मैत्री कुनै कसरत छन् ? बर्तमान परिपेक्षमा डक्टरले बाथका बिरामीलाई कसरतले निकै राम्रो गर्छ भन्ने सुझाब दिएका छन् । सही खालको कसरत गर्नाले जोर्नी सुन्निएकोलाई बिसेक पार्ने, स्वास्थ्यको निर्माण गर्ने, हड्डी र जोर्नीलाई मजबुत र लचकदार बनाउने गर्छ । सही कसरतको तालिका के होला त ? आर्थराइटिस फाउन्डेसनको अनुसार व्यायामले शरीरको लचकदार बढाउँछ, मांशपेसीको मात्रा बढाउँछ । शरीरको राम्रो स्फूर्तिपनको लागि र शरीरको सहनसक्ने क्षमता बढाउने प्रकारको व्यायामको ढाँचा बनाउनु जरुरी छ । नियमित हिंडाई : बाथको लागि नियमित हिंडाई सारै उत्तम हुन्छ । हप्ताको तीन पटक ३० मिनेटका दरले एकैनासले हिंड्नाले लामा हड्डीलाई सक्रिय बनाउँछ र सुन्निएको कम्मर तथा खुट्टाको जोर्नीलाई घटाउन सक्छ । सुक्ष्म व्यायाम कुनै पनि ब्यायाम गर्नु अगाडी धेरै आवश्यक हुन्छ । सामन्य रुपले खुट्टा उठाउने, हात देखि कुर्कुचासम्म तन्काउने, पछाडीको कम्मर हलुका ढंगले तन्काउने जस्ता सुक्ष्म ब्यायाम हिंड्नु अगाडी गर्न सकिन्छ । यसले शरीरको पिडालाई र खुट्टा फर्केनेबाट बचाउँछ । आफु हिंड्ने बाटो चाहिं उक्कालो हुनु हुँदैन जहाँ जोर्नीलाई धेरै भार पर्न सक्छ । पानीमा गरिने कसरत : पानी कम प्राभावको हुनाले पानी कसरत गर्नु राम्रो बिकल्प हो । पौडी पोखरीभित्र बसेर बाथका बिरामीहरुले धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ । क्रोनिक बाथका बिरामीहरुको लागि पानीमा २०-३० मिनेटसम्म हिंड्नु वा त्यसै खुट्टाले पाइडल मार्नु उचित हुन्छ । यसले जटिल अवस्थामा सहने क्षमता बढाउनुका साथै शरीरलाई तागतिलो बनाउँछ । समन्वय बढाउनका लागि पानीमा उल्टो हिंड्दा पनि हुन्छ वा त्यसै पानीमा आराम गरेर तैरिदा पनि हुन्छ । आफ्नो अवस्थालाई नकारात्मक असर गर्ने वा धेरै चिसो पानीबाट बच्नुपर्छ । तन्कने र योग : जोर्नीको दुखाईलाई सबै प्रकारका सहज तन्कने कसरतले कम गर्नेगर्छ । उभिएर खुट्टा उचाल्ने, कुम उचाल्ने, नारीलाई घुमाउने जस्ता ब्यायाम सजिलै गर्न सकिन्छ र यसले शरीरलाई लचक्दार राख्न मद्दत गर्छ । योगले शरीरको लचकपनलाई बढाउनुको साथै अरु धेरै गर्छ । योग यस्तो उर्जा शक्ति हो जसले भित्रि र बाहिरी अंगलाई समन्वय गर्ने काम गर्छ । आफुलाई जुनसुकै ब्यायाम उपयुक्त भएपनि यी कुराहरु सम्झी राख्नुहोस् : बाथका बिरामीहरुलाई सही सुक्ष्म ब्यायामले कसरत गर्दा लाग्नसक्ने चोटलाई कम वा निवारण गर्ने भएकोले यो गर्नु आवशयक हुन्छ । पिडा महशुस भएको खण्डमा आफ्नो शरीरलाई कसरत प्रणालीमा ढाल्न कुनै आवश्यक छैन । जोर्नीहरू सुन्निए भन्ने एक दिन नगर्दा पनि हुन्छ । शरीरलाई निको हुन समय लाग्ने भएकोले कसरतको तालिकामा सुस्तरी प्रबेस गर्नुहोला । आफ्नो तालिकामा कुनै पनि बैकल्पिक उपाय अपनाउनु परेमा चिकित्सक वा बिज्ञको परामर्स लिनुहोला ।
चकलेटको बारमा जति कोका छ, त्यो त्यति स्वस्थकर हो lतपाईलाई यो पत्याउन कठिन होला तर चकलेट वास्तवमा तपाईको स्वस्थको लागि राम्रो हो l तपाई बेहोस हुनु अघि पर्खनुहोस् l पहिला हामी कुराको मूलमा पुगौं l यदि तपाईले ठिक मात्रामा खानुभयो भने चकलेट वास्तवमा तपाइको लागि राम्रो हुन्छ l त्यसोभए मान्छेहरुले जहिले कुरा गर्ने चकलेटको खराब पक्षहरु के हुँन् ? तिनीहरु पालैपालो उडाऔं: चकलेटले क्याभिटी गराउँछ: प्रिय, ममी, डेन्टल क्याभिटीहरु कमोजोर मुखको सरसफाई र कुहिने कार्बोहाइड्रेटहरु धेरै हुने खाना खाँदा हुन्छ l जब यी कार्बोहाइड्रेटहरु मुखमा लामो समयको लागि छोडिन्छ, तिनीहरुले एसिड रिहाइ गर्छन् l यसले दाँतको इनामेल क्षति गर्न सक्छ र दाँतलाई कुवाउँन सक्छ l वास्तवमा, चकलेटमा ट्यानीन हुन्छ जसले वास्तवमा क्याभिटीहरु बन्न दिँदैन l त्यसैले अर्को पटक, प्रिय ममीहरु, आफ्नो बच्चालाई सानो टुक्रा चकलेट खान दिनुहोस् l तपाईले तिनीहरुसँग सामेल हुन सक्नुहुन्छ l चकलेट फ्याट र सुगरले भरिएको हुन्छ: हो, चकलेटमा दुवै स्याचुरेटेड र अनस्याचुरेटेड बोसोहरु हुन्छन् तर तिनीहरु प्राय ओइलिक एसिड र स्टेरिक एसिडको आकारमा हुन्छन् l अब, ओलीक एसिड (ओलिभमा भएको) र स्टेरिक एसिड रगत कोलेस्ट्रोल तहहरु घटाउन राम्रा छन् l त्यसैले कुनै बारमा उच्च मात्राको कोकाले चकलेटमा कम बोसो छ भन्ने सुनिस्चित गर्छ l त्यसोभए, सुगर नि ? सुगर खराब हो तर चकलेटको डार्क किसिमकोमा नियमित मिठो चकलेटभन्दा कम सुगर हुन्छ l डार्कको अर्थ बढी कोका सामाग्री हो र त्यसैले अरु फिलरहरु जस्तै कोका बटर, सुगर, नटहरु आदिको लागि ठाउँ हुँदैन l चकलेटमा कुनै पोषण हुँदैन: खासमा यसमा एन्टीअक्सिडेन्टहरुको मात्रा उच्च हुन्छ l एउटा एन्टीअक्सिडेन्टको काम के हो ? एन्टीअक्सिडेन्टहरुले तपाईको शरीरबाट फ्री रेडीकलहरु जसले रोग र उमेर बढाउछ त्यसलाई फ्लस गर्छ l त्यसैले, यदि तपाई जवान रहन चाहनुहुन्छ भने, हप्तामा एक पटक चकलेट खानुहोस् l दोश्रो, एन्टीअक्सिडेन्टहरु धेरै हुने खानेकुराले हृदयघात, स्ट्रोक, मुटु रोग, हाइपरलिपिडेमिया र बाथ कम गर्ने भनिएर प्रमाणित भएको छ l त्यसैले म एन्टीअक्सिडेन्टहरु भरिएको चकलेटको बार सेवन गर्छु, यो वास्तवमा राम्रो छ l चकलेटमा क्याफिन हुन्छ: चकलेटमा हुने क्याफिनको मात्रा कम हुन्छ तपाईको चिया, कफी वा कोला ड्रिंकहरुसँग तुलना गर्दा l अब, चकलेटको गजब स्वास्थ्य फाइदाहरु गिन्ती गरेर, यो तपाईलाई भन्न महत्वपूर्ण छ तपाईको लागि कुन चकलेट स्वस्थ छ l त्यो जुन सबभन्दा शुद्ध आकारमा छ-बिटरस्विट किसिमको, जुन कोका सामाग्रीमा उच्च छ, त्यहीनै तपाईको लागि स्वस्थ चकलेट हो l त्यसैले अर्को पटक तपाई डेसर्ट लिँदा, सानो चकलेट खानुहोस् तपाईको मिठोपन सन्तुष्ट गर्न र त्यो दोष बिर्सन l
आजको समयमा सबैभन्दा चिन्ताजनक दूई रोगहरु एड्स र क्यान्सर हुन् । दूर्भाग्यवस दूबै जंगली आगो जस्तै जनसंख्यामा फैलिएर भारतलाई एचआईभी संक्रमित ब्यक्तिहरुको संख्यामा तेर्सो उच्च स्थानमा ल्याएको छ, र हरेक बर्ष ८००००० नयाँ क्यान्सरको घटना रिर्पोट गरिएको छ । कुराहरु झन् खराब गर्न, केहि क्यान्सरहरु छन् जुन एचआइभीका संक्रमितमा मात्र देखापर्छ ।वास्तवमा यो एड्स परिभाषित क्यान्सर पाउनुले बिरामीहरुमा उन्नत एड्स विकास भएको जनाउँछ । तथापी यी क्यान्सरहरुको कारण स्पष्ट छैन । यो सम्भव छ कि एड्का बिरामीहरुमा प्रतिरोधात्मकता कम हुनाले, तिनिहरु यी क्यान्सरको धेरै जोखिममा छन् । यी पहिल्यै जटिल रोगहरुको दोहोरो आक्रमणले उपचार पक्रियामा समेत थप जटिलता ल्याउँदछ । त्यसैले यसको उपचार अनुभवी डाक्टरहरु अन्तर्गत हुनूपदर्छ जसले यी रोगहरुमा विशेषज्ञता पाएका छन् । एड्स परिभाषित क्यान्सरहरु निम्न हुन्: क्यापोसिस र्सकोम: यो छाला क्यान्सरको प्रकार हो । यो सामान्यतया अंग प्रत्यारोपण गरेका मान्छेहरुमा पाइएको छ । आजकल यो एचआइभी ÷एड्स संक्रमित समलैगिंक पूरुषहरुमा पाइन्छ र यसलाई क्यापोसिस र्सकोम पनि भनिन्छ । यो शारिरिक विभिन्न बिन्दुहरु जस्तैःछाला,लिम्फ,नोडहरु,कलेजो,फोक्सो, स्प्लीनर पाचन पथमा विष उत्पन्न हूनूको कारण बन्छ । नन-होडकिन लिम्फोमाः यो एचआइभी ÷एड्ससँग दोस्रो सबैभन्दा संम्बन्धित क्यान्सर हो । एन.एच.एलको विभिन्न उपप्रकारहरु प्राथमिक केन्द्रिय तांत्रिक प्रणाली लिम्फोमा र प्राथमिक प्रभाव भ्रम लिम्फोमा हून् । लगभग ४ देखि १० % मानिसहरु एचआइभी÷एड्सको साथ एन. एच.एल. विकसीत गर्छन । अन्य प्रकारका क्यान्सरहरु कलेजो क्यान्सर, मुख क्यान्सर, होड्किनको लिम्फोमा, टेस्टीकुलर क्यान्सर, मेलानोमा, घाटिँको क्यान्सर, कोलोरेक्टल क्यान्सर र छालाको विभिन्न क्यान्सर हुन् । एचआइभी ब्यक्तिहरुमा क्यान्सरको उपचारः एन्टि-एचआइभी औषधी नलगाउन्जेल सम्म संक्रमित ब्यक्तिहरुको भविष्य खरानि थियो । तिनिहरु पहिलेनै बिरामी थिए र उनीहरुको शरीरको क्यान्सरको उपचार सुरु नगर्दै तिनिहरुको शरीर कमजोर हुन्थ्यो । वर्तमान क्यान्सरको उपचार एन्टी-एचआइभी औषधीसँग मिसाइएको छ । तथापि, क्यान्सरको ह्द र एड्सको हेरविचारको आवश्यकता अनुसार, किमोथेरापी र अन्य एचआइभी सम्बन्धी औषधीहरु बिच भिन्नता गरिन्छ । क्यापोसिस सार्कोमा उपचार: प्राय एन्टी एचआइभी औषधीहरु यो क्यान्सरको उपचार गर्न पर्याप्त हूँदैन । बिष,जो भाइरल हुन्छन् हट्छन । प्रतिरक्षा प्रणाली राम्रो हून्छ । बिषहरु आन्तरिक छन् भने कहिलेकाहिँ केमोथेरापी र विकिरण पनि आवश्यक पर्न सक्छ । नन-होडकिन लिम्फोमाको उपचार: एन.एच.एल. सम्बन्धि एड्स छिटै बढ्दै जान्छ र तिब्र केमोथेरापीको आवश्यकता पर्दछ । अत्याधिक सक्रीय विरोधि रिभ्रोइरल थेरापी र ड्रग्सको प्रयोगको आविष्कारले संक्रमीत शरीरलाई नयाँ रक्तसेल बनाउन सहयोग गर्छ जसले थोरै रक्त सेल गणनाको कारण हुने एचआइभी संक्रमितको जिज्ञासा घटाएको छ , केमोथेरापि तिनको लागी प्रसशीत हून सकेन , तर यी प्रगतिहरुको साथमा ,तिब्रतापूर्वक केमोथेरापि उपचारलाई ब्यावस्थापन गर्न सकिन्छ । गर्भाशय क्यान्सरको उपचार राम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली र आक्रमक गर्भाशय क्यान्सर भएको महिलाको हितमा हझै पनि गैर-एचआइभी महिलाहरुको जस्तै उपचार गर्न सकिन्छ । तिनिहरुले शल्यक्रीया र अन्य पारिवारिक उपचारमा पनि राम्रा काम गर्न सक्छन् । क्यान्सरलाई सुरुवातमै पत्ता गर्दै: जब कूनै लक्ष्ण स्पष्ट हुदैन तब स्क्रिनिंगले क्यान्सरको उपस्थिती खोज्न सहयोग गर्दछ । तथापी क्यान्सरहरु परिभाषित गर्ने एड्स स्क्रिनिंगले पत्ता लगाउन सक्दैन यसकारण नियमित चेकअप र नजिकको निगरानिले क्यान्सरको लक्ष्ण भएमा पत्ता लगाउन सक्छ । पप परिक्षणले महिलाहरुमा गर्भाशय क्यान्सरको खोजमा मद्दत गर्दछ । तथापि एचआइभी महिलाको लागी यसलाई बारम्बार गर्न जरुरी छ । एचआइभी पत्ता लागेको पहिको वर्षमा दुई पटक र छ महिनाको अन्तरालमा । यदि परिक्षण सफा भएमा, तिनिहरुले त्यस लगत वर्षमा एक पटक पप परिक्षण नियमित रुपमा गर्नुपर्छ । अन्य एड्स सम्बन्धित क्यान्सरको लागि स्क्रिनिंग परिक्षण अझै पनि लागु हँदैन । क्यान्सरको जोखिम कम गर्दै: एचआइभीले शरिरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बिगारी शरिरलाई विभिन्न रोगवाट आतंकित बनाउँछ । एचआइभी पहिचान भएका लागी क्यान्सरबाट बच्न राम्रो स्वस्थ्य अभ्यासहरु आवश्यक छ । तिनिहरुले कदापि धुम्रपान वा मध्यपान गर्न हुदैन । ड्रग्स लिने र असुरक्षित यौन अभ्यासहरुले पनि क्यान्सरको खतरा बढाउँछ l सन्तुलित आहार ,शारीरिक गतिविधि र उचित शारीरिक तौल राख्नु अत्यन्त महत्वपुर्ण र उपयोगी छन् ।
मनोवैज्ञानिक दुर्बलतायौन शारीरिक मात्र हैन तर मानसिक रूपमा पनि उत्तिकै संलग्नता हुने कुरा हो । मानसिक उत्तेजना र प्रतिक्रिया समग्र आनन्दको लागि उत्तरदायी छ; र यसकारण कुनै पनि प्रकारको मनोवैज्ञानिक अशांति वा तनाव वा चिन्ता जस्ता मानसिक समस्या मनोवैज्ञानिक दुर्बलताको कारण बन्न सक्छ । तनाव वा थकाई मनोवैज्ञानिक दुर्बलताको लागि सबै भन्दा अधिक स्पष्टीकरण हो । उदाशिनता र पोस्ट ट्रम्याटिक स्ट्रेस डिसर्डर पनि मनोवैज्ञानिक दुर्बलतामा परिणाम हुनसक्छ । यौन वा शारीरिक दुर्व्यवहारको एक मानसिक आघात, यौन सम्बन्धको कारण अपराध, साझेदारहरूको बीचमा समस्या पनि योगदान गर्दछ । एक यौन पहिचान मा भ्रष्टता पनि असमानता को एक प्रमुख कारण हो । यौन वा शारीरिक दुर्व्यवहारको मानसिक आघात, यौन सम्बन्धको कारण हुने लाज, पार्ट्नरहरूको बीचको समस्याले पनि योगदान गर्दछ । यौन पहिचानको भ्रष्टता पनि दुर्बलताको एक प्रमुख कारण हो ।दुर्बलता अनन्त शारीरिक विकारहरूको नतिजा हुनसक्छ, विशेषगरी यदि मानिसहरूले यसलाई वेवास्ता गर्छन् । यस विकारको ज्ञानको अभावले समयको अवधिको साथ चिन्ता र तनाव बढाउँछ । त्यसैले कारकहरू निर्धारण गर्दा शारीरिक कारणहरू पहिला जाँचेर त्यसपछि मानसिक कारणहरूको पहिचान गर्नुहोस् । मनोवैज्ञानिक दुर्बलता कहिलेकाहीं स्थितिगत वा केवल एक विशेष पार्टनरमा हुन सक्छ र उपचारको पहुँच कारण अनुसार भिन्न हुनसक्छ ।सल्लाह लिनुले मनोवैज्ञानिक दुर्बलताको मामलामा चमत्कार गर्दछ । उदाहरणका लागि, उदाशनिता वा चिन्ताको अवस्था सुधार गर्न उपचार चाहिन्छ । पोस्ट ट्रम्याटिक स्ट्रेस डिसर्डर वा दुर्व्यवहारको सामना गर्न चिकित्सा उपचार चाहिन्छ । कहिलेकाहीँ केवल दुर्बलता गराउने शारीरिक अवस्थाको व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुन्छ । त्यसोभए पछाडि नपर्नुहोस्, तपाइँको यौनको चाहना फिर्ता पाउन साझेदारी गर्नुहोस् !!
तपाईले आफ्नो यौन संक्रमणबारे कुरा नगरुन्जेल नपर्खनुहोस् l तपाईले कसरी र किन आफ्नो मुख खोल्नुपर्छ र त्यसबारे भन्नुपर्छ यहाँ छ lहामीहरु जिईरहेको समय डरलाग्दो समय हो। विश्वभर यौन सम्बन्धित समस्याहरु, रोगहरु र अवस्थाहरुले प्रभावती भएका मानिसहरुका उच्च संख्या मात्रै पनि भयाभव छ। एड्स, यौन संक्रमणहरु जस्तै सिफिलिस र गोनोरिया, दादहरु, HPV आदि तीव्र भएर बढि रहेको छ र यसले एउटा जिम्मेवार पूर्ण यौन व्यवहारको माग गरिरहेको छ। तरैपनि, त्यो त एउटा आदर्श संसार हुनेछ जहाँ मानिसहरु एउटै जोडी संग जिम्मेवार पूर्ण ढंगले व्यवहार गर्नेछन। जोखिम पूर्ण यौन सम्पर्कमा लिप्त भए भने एउटा एकल व्यक्तिलाई पनि यी रोगहरु लाग्न सक्छ। कल्पना गर्नुहोस् अमेरिकामा एक जना महिलाले आफ्नो श्रीमानले उनलाई हर्प्स (दाद) सारेको कारण $७५०, ००० अंश प्राप्त गरेकी थिइन्। तपाईं कानूनी रुपले दोषी नठहरिनु भएता पनि, नैतिक जिम्मेवारीलाई बहन गर्नु पर्दछ र तपाईंको साथि संग सम्भावित यौन प्रसारित संक्रमणको विषयमा छलफल गर्नु पर्छ! दश वर्ष देखि खुशी साथ विवाह भएको ज्याकको अवस्थालाई हेर्नुहोस् जसको शहर देखि बाहिर अफिसको यात्रामा कसै संग असावधानी पूर्ण यौन सम्पर्क भयो। उसमा कुनै पनि स्पष्ट देखिने लक्षणहरु देखा परेन तर एक महिनामा, उसको श्रीमतीमा हर्प्स (दाद) को संकेत देखियो र उसको विवाह धराशायी भयो कारण उसको श्रीमती आफ्नो श्रीमानको स्पष्ट विश्वासघात पूर्ण र निर्दयी व्यवहारलाई बुझ्न श्रीमतीलाई धेरै गाह्रो भयो जसले गर्दा उनलाई एउटा गम्भीर यौन संक्रमण हुन पुग्यो। (सिफिलिस सम्बन्धि लेखको निम्ति www.topdoctorsonline.com लाई हेर्नुहोस) त्यति बेला सम्म त उसले, सम्पूर्ण सम्भावना सहित, उसको नियमित यौन सम्पर्कको जोडी वा साथीलाई सारी सकेको हुन सक्छ। वा, शायद, अर्को सम्भावना पनि के हुन सक्छ भने त्यो व्यक्तिलाई यौन संक्रमण भएको छ भनि थाह हुन सक्छ तर आफ्नो साथीलाई कसरी बताउने भनि थाहा नहुन सक्छ। यदि एउटा व्यक्तिलाई उसको संक्रमणको विषयमा थाहा छ भने, तरपनि अर्को व्यक्तिलाई जानी जानी त्यो रोग सारी दिन्छ भने, त्यो एउटा नियोजित हत्या बराबरको अपराध हुन्छ। हो, तपाईंको साथीलाई बताउन गार्हो हुनेछ जसो गर्दा सम्बन्धको अन्त्य नै हुने संकेत मिल्न सक्छ वा त्यस सम्बन्धमा अत्यन्त ठुलो फाटो ल्याउन सक्छ। त्यसकारण, यदि तपाईं यस प्रकारको परिस्थितिमा अल्झिनु भयो भने, तपाईं के गर्नु हुने छ? विकल्पको रुपमा एउटा यौन चिकित्षक कहाँ जाने र उसमाथि नै भर पर्ने र त्यस पछि दुवै जना भेट्न जाने र विज्ञले त्यो कुरा आफ्नो जोडीलाई बताउन लगाउने हुन सक्छ। त्यो यदी तपाईं स्थिर सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने ठिकै हुन सक्छ। तर त्यस्तो जोडीको निम्ति जो असावधानीपूर्ण यौन सम्पर्क गर्छन, र संक्रमित व्यक्तिले प्राय आफ्नो संक्रमणको विषयमा त्यति खुल्न चाहंदैनन र यदी अर्को व्यक्ति एकदम अपरिचित हो भने त झन् यसमा कुनै चासो नै नराख्न सक्छन। समाचारको एउटा रिपोर्टले अझ कति चकित पार्ने तथ्यांक प्रकट गरेकोछ: धेरै मानिसहरुले भने कि तिनीहरु, आकस्मिक साथीहरु (५० प्रतिशत ) वा दिर्घ-कालिन साथीहरु (३९ प्रतिशत ) संग यौन सम्पर्क गर्न भन्दा अघि कहिलेकाहिँ, विरलै जांच गर्ने गर्छन वा कहीले पनि गर्दैनन्। यौन प्रसारित संक्रमणको जांचको विषयमा छलफल गर्यौं भन्ने मानिसहरु मध्ये, धेरै थोरैले मात्रै स्वीकृत यौन जोडीहरुको कुरा गरे वा तिनीहरुको पछिल्लो यौन क्रियाकलापको सम्बन्धमा कहीले जांच भएको थियो भन्ने कुरा गरे। यी मुद्दाहरु यौन प्रसारित संक्रमण रोगहरुको जांच गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण भागहरु हुन्, अनुसन्धानकर्ताहरुले भनेका छन। करिव एक-तिहाइ सहभागीहरुले तिनीहरुका साथीहरुलाई उनिहरुलाई यौन प्रसारित संक्रमण छैन भनि बताएका छन भनि भने जबकी उनीहरुको पछिल्लो यौन साथी पछि कुनै जांच गरेका छैनन्। एक अमेरिकी महिलाले उनको पुर्व-पति बाट अदालतमा $७५०,००० प्राप्त गरेकी थिईन कारण उसले उनलाई हर्प्स (दाद) दिएको थियो, र कानूनको चलन यस्तो छ कि यसले मानिसहरुलाई दोषी ठहराउँछ। ध्यान दिनुहोस् एउटा कन्डमको प्रयोग गर्दा पनि यो अर्को व्यक्तिलाई संक्रमण सर्दैन भन्ने १००% ग्यारेन्टी छैन तर पनि तपाईंको अवस्था को बारेमा बताउने आँट छैन भने तपाईंले कमसेकम कन्डमको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंको साथी धेरै जना संगको यौन क्रियाकलापमा लिप्त छ भन्ने तपाईंलाई महसुस भयो भने र उसलाई संक्रमण भएको छ भन्ने तपाईंलाई लाग्यो भने, तब तपाईं उ/उनिले जांच नगराए सम्म यौन सम्पर्क गर्दिन भन्ने अधिकार तपाईं संग छ। यदि तपाईंले यौनांग वरिपरि फोकाहरु देख्नु भयो भने मुख वा गुद्वार मैथुन वा अन्य कुनै पनि प्रकारको यौन सम्पर्कमा नलाग्नुहोस् र जहिले पनि कन्डम लगाउन जोड दिनुहोस; यसले तपाईंको जीवन बचाउन सक्छ।
Q तपाईंको अनुहारमा उमेरको दागबाट कसरी छुटकारा पाउनु हुन्छ ?
उमेर अनुसारको दागहरु सूर्यको किरणहरुको धेरै वर्षको परिणाम हो । त्यहाँ उपचारका थुप्रै विकल्पहरु उपलब्ध भएका हुन्छन् । डर्माब्रासन, रासायनिक पदार्थले खुर्केर, लेजर थेरापी र क्रायोथेरापीजस्ता ब्लीचिङ क्रीम वा कस्मेटिक प्रक्रियाहरूको प्रयोग रहेको छ । तपाईंलाई सबैभन्दा राम्रो उपचारको बिकल्प के हुनेछ भनेर थाहा पाउन दर्ता भएको सौन्दर्यविदसँग परामर्श लिनुहोस् ।
Q मेरो कपाल टुक्रिएर झर्छ !! कुनै पनि उपचार छ ?
कपाल टुक्रिएर झर्ने कारण भनेको कपालमा सुख्खापना र हानी भएको कारणले भएको हो । कपाल सुख्खा हुने र क्षति पार्न सक्ने कारकहरु भनेको सूर्यको किरणहरू धेरै परेर, खराब पोषण, रसायनमा आधारित कपाल उत्पादनको अत्यधिक प्रयोग, कपाल सुख्खा बनाउने साधनहरुको प्रयोग गरेर हुन् । हामी यहाँ तपाईंको कपालको स्वास्थ्य सुधार गर्नका लागि केही सामान्य सुझावहरू सूचीबद्ध गरिरहेका छौं: तातो तेलको मालिश, नियमित रूपमा कपाल काँटछाँट गर्ने, कपाल सुख्खा पार्ने वा स्टाइल पार्ने उत्पादनहरुको प्रयोग कम गर्दै लैजाने, सन्तुलित र पोषक आहार अबलम्बन गर्ने, घाममा जाँदा तपाईंको कपाललाई राम्रोसँग ढाक्ने र गीलो कपाल हुँदा कपाल कोर्ने काम नगर्ने गर्नु पर्दछ ।
Q मेरो काकी ४ दिनदेखि कुनै पनि उल्लेखनीय कारण बिना पेट दुख्ने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ ।
पेटको दुखाई धेरै कारणहरुले गर्दा उत्पन्न हुन सक्छ । यो अपच जस्तो साधारण कुरा र रजस्वला हुदाँ हुने दुखजस्ता केही कुरा र मृगौलाको पत्थरी वा आन्तरिक चोटको रूपमा गम्भीर अवस्थामा हुन्छ । सबैभन्दा राम्रो दृष्टिकोण भनेको यू.एस.जी. गर्ने र परिक्षण र निदानको लागि ग्यास्ट्रोइन्टोलोजिस्टसँग जानुहोस् ।
Q मेरी श्रीमतीले स्तनपान गराउदैँछिन् । के उनी आईरन र क्यालसियम औषधि लिन सक्छिन् । मेरो बच्चा ११ महिनाको भएको छ ।
यदि उनीलाई कमी छ भने उनी ती कुराहरु लिन सक्छिन् । स्तनपान गराउने महिलाहरुलाई क्याल्सियम पूरक खुवाउनु हुन वास्तवमा सल्लाह दिईएको हुन्छ । साथै उनीलाई राम्रो तरिकाले सन्तुलित र पोषणशील आहार दिन पनि प्रोत्साहन गर्नुहोस् ।
Q मेरो दुवै काखी मुनि थाहा नै हुन नसकेका घाउँहरु छन्
यो काखी मुनि चिलाउनेलाई चिकित्सकीय रुपमा दाद वा प्रुरिटसको रुपमा चिनिन्छ । काखी चिलाउने कारण अनुभव हुने लक्षणहरु त्यहाँ भएको अवस्थाहरुको आधारमा फरक हुन्छन् । तपाईंलाई रातो हुने, दुख्ने, सुन्निने र खत हुने सँगसँगै चिलाउने अनुभव हुन सक्नेछ । चिलाएको ठाउँमा कन्याउँदा अस्थायी रूपमा लक्षणबाट केही राहत पाउन सकिन्छ, यद्यपि यसरी कन्याउदा गहिरो घाउ हुन गई संक्रमण हुनसक्छ । शरीर सरसफाई नहुँदा, व्यक्तिको संक्रमण, उल्टो चिलाउने, छाला पोल्ने हुनसक्छ । काखी गन्हाउँदा लगाउने औषधि र पसिना नबगोस् भनेर लगाउने औषधि छालामा सिधै लगाउनुपर्ने भएकोले छाला चिलाउने हुनसक्छ । काखीमुनि चिलाउन प्राकृतिक कुरा होइन र यसलाई बेवास्ता गर्नुहुदैँन । यसको उपचार हुने भएकोले, यदि तपाईं यस अवस्थाबाट पीडित हुनुहुन्छ भने, तपाईंले यस्तो छाला पोल्ने समस्या रोक्न चिकित्सा उपचार खोज्नु राम्रो हुन्छ ।
Q मेरो किशोरी छोरीहरू नङका पालिसहरु लगाउन चाहन्छन्, तर मैले सुनेको थिएँ कि धेरै नङका पालिसहरूमा फर्मलडेहाईडाइड हुन्छ र क्यान्सरको कारण हुनसक्छ । के यो मेरो छोरीहरूले प्रयोग गर्न सुरक्षित छ ?
ए.फडी.ए.द्वारा दिइएको मार्गनिर्देशन अनुसार यदि नङको पालिसको तौलमा ०.२ प्रतिशतभन्दा कम फर्मलडेहाईडाइड सामाग्री छ भने यो प्रयोग गर्न सुरक्षित हुन्छ । त्यसैले निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं आफ्ना छोरीहरूको लागि राम्रो गुणस्तरको पालिस किन्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईंहरु सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुभयो भने नङ पालिस प्रयोग सुरक्षित हुन्छन् ।
Q मेरो लिङ्गको वरिपरि डण्डिफोरहरु आएका छन् । म यसलाई कसरी हटाउन सक्छु ?
के तपाईं यौनमा सक्रिय हुनुहुन्छ ? तपाईंलाई साधारण अनुकूलन हुने वा फोलिकलिटिस, अन्य छालाका रोगहरु वा एस.टी.डी. (यौन क्रियाबाट सर्ने रोग) बाट पीडित भएको हुन सक्नुहुनेछ । यसलाई सही रूपमा निदान गर्नका लागि, घाँउहरूको शारीरिक परिक्षण आवश्यक छ । कृपया सो कार्यको लागि यूरोलोजिष्टसँग परामर्श लिनुहोस् । उपचार निदानमा निर्भर हुनेछ ।